I-Master Of Matress ukukhiqiza | JLH Mattress
IMIKHIQIZO YAMARRIVALS ENTSHA
I-JLH ku # 1 ka-Kangtai South Road, Shatou Industrial Park, esifundeni saseNanhai, ePheShan City, eSifundazweni saseGuangdong, eChina. Imikhiqizo ephambili I-JLH IMITHETHO ESEJWAYELEKILE YEMIBHALO. Ngentengo yokuncintisana, eyethu ithandwa kakhulu futhi eyenza iJLH ibe nokuncintisana kakhudlwana. Kwenziwe ngekhwalithi ye-premium, umkhiqizo we-JLH ubonakaliswa uqina isikhathi eside ngemuva kwezikhathi zokuhlolwa futhi unempilo yempilo ende kunale yendabuko. Umkhiqizo uthola izincomo eziningi: ubukeka uthambile, unesitayela futhi ulingana kahle. Thuthukisa ukufudumala okuphelele.
I-21CA-09 Coil Pocket Spring Mattress Engcono Kakhulu
I-JLH ku- # 1 ka-Kangtai South Road, Shatou Industrial Park, esifundeni saseNanhai, eFoshan City, eSifundazweni saseGuangdong, eChina. Imikhiqizo ephambili 21CA-09 Okubaluleke Kakhulu Okuqhubekayo Okuqhubekayo Coil Pocket Spring Mattress. Umkhiqizo mancane amathuba wokuqongelela amagciwane. Izinto ezisetshenzisiwe zinezici eziqinile ze-antibacterial ezinganciphisa ukukhula kwamagciwane. Umkhiqizo uphakama endaweni ezungezile enezindlu zawo zensimbi ezimibalabala nesembozo sokukhanya shatterproof. Inempilo ende yokusebenza ngenxa yesakhiwo sayo esiqinile. I-JLH yakhelwe kahle iqembu labakhi abangochwepheshe. Zigcwele imibono emisha futhi zamukele okuguqukayo kwezimakethe zokukhanyisa izimakethe ze-LED.
I-Double Layers Pocket Spring Mattress
I-JLH ku # 1 ka-Kangtai South Road, Shatou Industrial Park, esifundeni saseNanhai, eFoshan City, eSifundazweni saseGuangdong, eChina. Imikhiqizo ephambili Double Izendlalelo Pocket Spring Mattress. Ngokusebenzisa ukwakheka okuhle, uhlelo langempela libonisa ukuthi lunezindleko eziphansi nempilo yenkonzo ende. Umkhiqizo unohlelo lokushushuluza ukumunca umthelela esithendeni nase-arch, yingakho unikeza usizo kulabo abagqokile. Umkhiqizo kulula ukuwugcina. Abantu bangasebenzisa indwangu eyomile ukusula uthuli futhi bahlole njalo ukuthi kukhona izintambo ezilimele.
Umkhiqizi wase China China Base Base
Thola imininingwane engaphezulu! imininingwane emayelana nokuhlangana kombhede, ukusekelwa kombhede.